> Resource> Naghachi> Olee otú iji Igosi Pretec Data Recovery
Ị Pụrụ Isi Nyere Me weghachite Data si Pretec Flash Drive!
M zụtara a Pretec USB flash mbanye na-azọpụta ụfọdụ foto n'ime ya yester. Taa, mgbe m ịtinye ya kọmputa m, m na kọmputa gwara m ka m usoro ya. Amaghị m ihe mere, ma m mkpa n'ezie m videos azụ. Onye ọ bụla pụrụ inyere m aka?
Echegbula! Nsogbu gị bụ otu n'ime ihe ndị kasị mbipụta na flash mbanye ọrụ ma ọ bụ na kaadị ebe nchekwa ọrụ nwere ike na-ezute. Ma ọ bụ doro anya mfe iji weghachite gị furu efu data ọ bụrụ na ị na-enwe ezi Pretec data mgbake mmekọ.
Ebe a bụ nnọọ mma otu maka gị: Wondershare Data Recovery, ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac, nke na ị nwere ike mfe weghachite data si Pretec flash mbanye ma ọ bụ naghachi data si Pretec kaadị ebe nchekwa.
Download ikpe mbipute nke Wondershare Data Naghachi ugbu a!
3 Nzọụkwụ hazie Pretec Data Recovery
Site na iji nke a pụrụ iche e mere Prectec flash mbanye mgbake na Pretec kaadị ebe nchekwa mgbake ngwá ọrụ, ị ga-enwe iji weghachite a otutu furu efu, ehichapụ, formatted ma ọ bụ ọbụna rụrụ arụ faịlụ site na gị Pretec ngwaahịa, dị ka photos, videos, akwụkwọ faịlụ, wdg
Ugbu a, ka anyị na-eme mgbake na Wondershare Data Recovery maka Windows.
Nzọụkwụ 1 Họrọ Iweghachite ọnọdụ na Malite Pretec Data Recovery
Jikọọ gị Pretec flash mbanye ma ọ bụ Pretec kaadị ebe nchekwa na kọmputa gị na ẹkedori Wondershare Data Naghachi.
Ị ga mkpa iji họrọ a mgbake mode mbụ. Ebe a ka na-"Echefuola File Iweghachite" dị ka a na-agbalị.
Rịba ama: All atọ mgbake ụdịdị na interface nwere nkọwa zuru ezu banyere, ị nwere ike na-agụ ha nke ọma na họrọ onye suiting ị kasị.
Nzọụkwụ 2 iṅomi gị Pretec Flash Drive ma ọ bụ Pretec Kaadị ebe nchekwa
Na nke a nzọụkwụ, Wondershare Data Recovery ga chọpụta na depụta niile ike draịva na kọmputa gị, gụnyere otu maka gị Pretec flash mbanye ma ọ bụ Pretec kaadị ebe nchekwa. Ị dị nnọọ mkpa iji họrọ ya na pịa "Malite iṅomi" na-amalite ịgụ isiokwu furu efu faịlụ.
Nzọụkwụ 3 Naghachi Data si Pretec Flash Drive ma ọ bụ weghachite Data si Pretec Kaadị ebe nchekwa
Ugbu a na ngwá ọrụ ga-egosi niile achọpụtara data na edemede na n'aka ekpe nke windo. Ị nwere ike ele faịlụ aha, wee họrọ faịlụ gị mkpa ma pịa "Naghachi" na-azọpụta ha na kọmputa gị.
Cheta na: Biko adịghị ịzọpụta weghachiri eweghachi data gị Pretec ngwaahịa ọzọ mgbe mgbake.
The Ultimate Guide iji Hichapụ Files Iji iwu ozugbo na Wụk Line